राेचक खबर Archives - Page 72 of 83 - Purbeli News
दिनानुदिन तिजकाे बदलिदाे तडकभडक रितिरिवाजका कारण समाजमा धेरै विकृति फैलाएर महिलाहरू विच खिचातानी बडेकाे छ । महिना दिन अगि देखी दर खाने भनेर नाैटंकी गरेर कसले गहना धेरै लगाउने भनेर छिमेकीसँग कम्पिटिसन गरेर तिजलाइ भड,किलाे बनाउने महिलाले ध्यान दिनु पर्ने छ । यस पालीकाे तिज भदौ,८ बिहीवार छ। ७ गते बुधवार तीजको दर खाने दिन हाे पहिलो द...
माइत भन्ने बित्तिकै हरेक महिलाको अनुहारमा रौनक आउँछ । माइतको मोह महिलाले जीवनभर भुल्दैनन् । पतिले घरमा जतिसुकै सुख दिएको होस्, माइतमा पाइने सुखका अगाडि ती सबै कम लाग्छन् । माइतबाट सानो बोलावट मात्रै आउनुपर्छ, जानका लागि तुरुन्त तयार नहुने को नै होला र ? माइत जानु नराम्रो होइन । तर, प्रायः के पनि देखिन्छ भने जुन खुसी र उत्साहले महिलाहरु माइत जान्छन्...
यसरी सुत्दा रिसाउँछिन धनकी देबी लक्ष्मी,
हरेक व्यक्ति धन कमाउन चाहन्छ र त्यसका लागि दिनरात मेहनत गरिरहेको हुन्छ । तर, धेरै मानिस सफल हुन सक्दैनन् । उनीहरुको गुनासो हुन्छ- यतिधेरै मेहनत गर्दा पनि मनले चाहेको सफलता हासिल गर्न सकिएन । यसको कारण तपाईंका केही बानी पनि हुनसक्छन् । सुन्दा सामान्य लाग्ने बानी पनि धनकी देवी लक्ष्मीको लागि अनुचित लाग्न सक्छन् र तपाईंले गरिबी झेल्नुपर्छ । यहाँ हि...
इटहरीमा दिउसै यौन ब्यवसाय ९ जना यौनकर्मी सहित १२ होटल सञ्चालक पक्राउ
सुनसरी । इटहरीमा यौनधन्दा बढ्दै गएपछि प्रहरीले होटलका सञ्चालक विरुद्ध कारबाही सुरु गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीको टोलिले इटहरीका बिभिन्न होटलबाट ९ जना यौनकर्मी सहित १२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले इटहरी स्थित गणपति होटल लगायतका बिभिन्न होटलबाट उनिहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीले इटहरीको नेशनल गल्लीमा रहेको गणपति होटल लगायत अन्य ह...
यस्तो थियो हाम्रा लोकप्रिय राजा बीरेन्द्रको महानता !आफुलाई सम्मानको लागि बिछ्याइएको रेड कार्पेटमा तत्कालिन गद्दी आरोहण रजत जयन्तीका अध्यक्ष तथा पुर्वप्रधानमन्त्री बयोबृध मातृकाप्रसाद कोइरालालाई रेड कार्पेट्मा सम्मान गर्दै,आफू बाहिर हिड्दैं । तस्बीर साभार प्रकाश मास्केको फेसबुकबाट वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह(वि.सं. २००२-२०५८) नेपालका दशौं शाह...
यस्ता छन संसारका १० सेक्सी राजनीतिज्ञ (तस्विरहरू सहित)
संसारका कतिपय स्थानमा महिलाहरु मोडेल या अनस्क्रिनबाट संसदसम्म पुगेका छन् । यी महिलाहरूमा सौन्दर्यता मात्र नभई मस्तिष्क र शक्ति पनि छ । कलाकार वा मोडलिङ पेशा त्यागेपछि उनीहरू सरकारी मुद्दामा सामेल भए । यद्यपि, यो सत्य हो की पुरुषका आँखा उनीहरुका आकर्षक शरीरमा परिरहेको हुन्छ । १ मारिया कार्फाग्ना (इटाली) मारिया इटालीकी राजनीतिज्ञ हुन् । उनी पहिले...
मानिस सामाजिक प्राणी हो । आमाको गर्भबाट भूइँमा झरेसँगै ऊ विभिन्न भूमिकामा परिभाषित हुन्छ। कसैको छोरा-छोरी, भाइ-बहिनी, नाति-नातिनी आदि । जब ठूलो हुँदै जान्छ, अनि रगतसँग कुनै साइनो नजोडिएकाहरु पनि उसको जीवनमा जोडिन आइपुग्छन्, साथीको रुपमा साथीको सम्बन्धलाई पवित्र र मनको नाताको रुपमा बुझ्ने चलन छ । कतिपय साथी यति फलदायी हुन्छन् नि, उनीहरुको संगतकै ...
सन्तानको आचरण जन्माउने हामी आमाबाबु
आमा बाबु भनेका बालबालिकाका पहिला गुरु हुन् र घर पहिलो पाठशाला। हामी जति राम्रा र हाम्रो घर जति राम्रो पाठशाला बन्छ हाम्रा नानीहरु पनि त्यत्तिकै राम्रा भएर निस्किन्छन्। मतलब कुनै पनि बालबालिका राम्रा वा नराम्रा हुनुमा उनीहरुको भन्दा ठूलो जिम्मेबारी हामी आमाबाबुकै हुने गर्छ।हामी पहिलो गुरु भएर नानीहरुलाई कस्तो पाठ सिकाइराखेका छौ त? समाजमा अभिभावकले आ...
४ वर्षे छोरालाई जिउँदै जलाइने आमा
ये एउटा दर्दनाक अमेरिकामा घटेको घटनाले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ । एउटा बच्चाको जीवनमा आमाको ठूलो महत्व हुन्छ । अझ सानो बेलामा त बच्चाका लागि आमा र आमाका लागि बच्चा नै सबै थोक हुन्छन् । एमेलिया डिस्टासिओ नाम गरेकी एक महिलाले आफ्नै ४ वर्षीय छोरालाई जिउँदै जलाएर मारेकी छन् । प्रहरीका अनुसार एमेलियाले उनको छोरालाई ७ वटा बेल्टले बाथटबमा बाँधी जलाएर मा...
हिजोआज हामी फेसबुकको पुस्तामा छौ । फेसबुकमा हेरेको, भेटेको आधारमा पनि विवाह भैरहेको हुन्छ । फेसबुककै आधारमा एकले अर्कालाई मन पराइरहँदा उनीहरूका अभिभावक एवं अग्रजहरूको आशीर्वाद छ कि छैन त्यो बिर्सिरहेका हुन्छन्।श्रीमान –श्रीमती भनेका एक रथका दुई पांग्रा हुन भनिन्छ । हो, यो सम्बन्त्रभित्र धेरै अर्था छ । भगवानकै पालादेखिको गहिरो प्रेम पनि यही सम्बन्...